Sidee oo bilaash ah ilaa meel ku filan ee macruufka 8 Hagaaji
1 iPhone Delete
Delete taariikhda Spotlight
Delete Call Taariikhda
Delete Text Xiriir
Delete iPhone Taariikhda
Delete iPhone Xiriir
Delete iPhone Kale
Delete iPhone Kukiyada
Delete iPhone Kalandarada
Saar iPhone Data
Delete email iPad
Masixi iPad u Iibinta
3 iPhone Nadiif ah
iPhone Nadiifinta Apps
PhoneClean lagu bedelan karo
IPhone Nadiif ah
Nadiifi App Data
Nadiifi iPhone Kaydinta
Clear iPhone Taariikhda
IPhone Clear History Browser
Clear iPhone Space
Clear iPhone Data
Si joogto ah oo cad iPhone
4 iPhone masixi
Masixi jailbreak iPhone
Masixi iPhone 6S
Masixi content iPhone
Masixi iPhone Taariikhda
Ha ogolaan in iPhone hor Iibinta
Masixi iPhone Permanenly
Ha ogolaan in iPhone
5 Qaar kale
Qaabka iPhone Gebi
Iska yaree iPhone Photo Size
Factory celi iPhone
Dib u celi jailbreak iPhone
Dib u celi iPhone
Sida lagu Helo filan Kaydinta on iPhone / iPad / iPod taabto si rakib macruufka 8
"Update Tani lama lagu rakibay, sababtoo ah waxay u baahan tahay ugu yaraan 4.6 GB ee kaydinta". In kastoo looga baahan yahay kaydinta saxda ah ee iPhone kala duwan, iPad, iPod iyo taabashada waa ka duwan yahay, dadka isticmaala in ka badan 75% qalab macruufka ah kuwaas oo isku dayaya in ay casriyayso si macruufka 8 leedahay ama aad ka heli doonaa digniin ah. Halkan waxaan doonayaa in aan kuu sheego in ka hor inta hagaajinta in macruufka 8, fadlan hubi in aad qabto meel ku filan,
Ugu yaraan 2GB kaydinta ku saabsan qalabka haddii aad ku socoto in la gaarsiiyo in macruufka 8 via Lugood,
Diyaari ugu yaraan kaydinta 6GB ku saabsan qalabka macruufka haddii aad qorshaynaysid in aad qabato waxan soo update macruufka 8 si toos ah qalab aad (in ka badan hawada);
Waa maxay sababta looga baahan yahay kaydinta waa kala duwan oo lagu casriyeeyo si macruufka 8 via Lugood iyo si toos ah qalabka?
Halkan waa jawaabta, marka lagu casriyeeyo si macruufka 8 dhex Lugood, macruufka 8 rakibo baakada la soo bixi doonaa via Lugood iyo badbaadiyey on your computer. Iyo Lugood toos ah ka soo fagid doonaa xirmo rakibo on your computer. Oo sidaas waa meel ma waxa uu ku mashquulsan aad iPhone, iPad ama iPod xiriiri ilaa 8 macruufka la geliyo. Iyo macruufka 8 nidaamka oo dhan qalliinka waxay u baahan tahay oo keliya in ka badan 1GB. Haddii aad u update macruufka 8 badan hawada, waxaan ula jeedaa, aad iPhone, iPad, iPod ama taabashada toos ah, markaas inaad si ay u diyaariyaan meel dheeraad ah oo ku saabsan qalab macruufka ah si loo badbaadiyo xirmo rakibaadda iyo sidoo kale meesha bannaan ee loogu talagalay unpacking ah. Taasi waa sababta loo baahan yahay kaydinta dheeraad ah halka lagu casriyeeyo si macruufka 8 si toos ah qalab aad. Haddii aadan haysan kaydinta wax badan oo ku saabsan qalab macruufka ah, weeyna ahayd inaad u cusboonaynta in macruufka 8 via Lugood , ha hawada (si toos ah qalabka).
Si kastaba, haddii aad ku socoto in la gaarsiiyo in macruufka 8 via Lugood ama ka badan hawada, waa in aad u diyaariso kaydinta lacag la'aan ah. Qaybta ugu adag tahay sida loo nadiifiyo iPhone, iPad, iPod ama taabashada si lacag la'aan ah ilaa meel dheeraad ah oo macruufka 8 update tan iyo markii ay jiraan barnaamijyadooda aad u badan iyo macluumaadka loo baahan yahay. Haddii aad run ahaantii ma oga waxa la sameeyo, raac tallaabooyinka hoose si aad u hesho ee macruufka 8 update kaydinta ku filan.
Talaabooyinka oo bilaash ah ilaa Space for macruufka Qalabka la Sameeyo macruufka 8 Update
Tallaabada 1. Delete barnaamijyadooda la isticmaalin
Tubada ee mid ka mid ah app ku saabsan iPhone, iPad ama iPod xiriiri ilaa dhan u oynayo ee Dalka Chine. Riix calaamadda X bidixdiisa sare ee Chine la isticmaalin in ay tirtirto barnaamijyadooda hal-by-ka mid ah kuwan. Dad badan ayaa la sheegay in ay leeyihiin daraasiin, ama ilaa in ka badan 100-ada lagu rakibay ay iPhone, iPad, iPod ama taabashada. Taasi dhab ahaantii waxay qaadataa meel aad u badan. Haddii aadan isticmaali barnaamijyadooda qaar ka mid ah hadda, marka hore tirtirto iyaga. Later, haddii aad mar kale u baahan tahay, in App Store deegaanka iibsaday, ka heli in mar kale ku soo bixi.
Tallaabada 2. photos kaabta iyo video
Waa in aad sawiro gurmad iyo video aad ka qabsadeen qalab macruufka si aad u computer, ka dibna tirtirto nuqul ku saabsan qalab macruufka ah. Waxaad og tihiin,-qeexidda kasta oo dheer video mashquulin karo kaydinta yar MB. Si photos gurmad iyo videos ka iPhone, iPad ama iPod xiriiri in computer, waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare si aynu caawimo barnaamijkan aad u samayn si xor ah oo gumaarka.
Download Wondershare TunesGo maxkamad free version!
3. Tallaabada fariimaha qoraalka ah Delete iyo iMessages
Messages, gaar ahaan, kuwaas oo ay ku jiraan wada hadallada ku lifaaqan farriin badan oo qaadan meel aad u badan. Waa in aad tirtirto wada hadal aan la rabin oo bilaash ah ilaa meel macruufka 8 update.
Tallaabada 4. Isticmaal Wondershare SafeEraser in ay ka saarto faylasha ka iPhone, iPad, iPod iyo taabashada muuqaal ma aad arki karto.
Saar files junk ka qalab macruufka ah. Waxaa jira dad badan files junk, sida faylasha log, sawir iyo video khasnado, Lugood syncing khasnado, file meel gaarka download, app khasnado, app cookies iyo files app meel gaarka. Waxaan baari shaqada iyo nadiifin badan kaydinta 500MB. Mid ka mid ah wadashaqaynta leedihiin waxa aan isku dayay iyo nadiifin kaydinta 1GB. Waxay ku xiran tahay xaaladdaada macruufka ah ee sida badan meel u sii daynayaan.
Si joogto ah masixi files tirtiray ka qalab macruufka ah. Faylal ay aad tirtiray, sida farriimaha qoraalka ah iyo sawiro, aan ka baxeen isla markiiba. Waxay meel ay jiraan ku saabsan qalabka laakiin la arki karin. Software Tani iskaan doono iyo muujiyaan faylasha kuwaas oo ha idin iyaga eegista saarto.
Wondershare SafeEraser - Ilaali Privacy Personal
Si joogto ah masixi Your Android & iPhone si aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah shakhsi.
Saar files tirtiray on idevices si joogto ah; files tirtiray mar dambe recoverable.
1-Guji Nadiifinta si aad u nadiifiso files junk iyo dadajiso qaab iDevice.
Ma taageeri kaliya sawirada & videos, laakiin sidoo kale ka ilaaliyaa diiwaankaas wicitaankaaga, fariimaha iyo in ka badan.
Masixi iPhone Private Data
1-Click to Tayadoodii iPhone
Cadaadi / dhoofinta iPhone Photos
Saar iPhone tirtiray Files
Ha ogolaan in iPhone Ka hor inta Iibinta
Ha ogolaan in Android Phone joogto ah
1. Ku rakib iyo abuurtaan barnaamijka on your computer. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan qalab macruufka la your computer.
2. In uu furmo suuqa hoose, riix batoonka u dhiganta: 1-Guji Nadiifinta (faylka junk wuxuu tegsiiyaa), masixi Private Data (saarto taariikhda raadinta, taariikhda Safari, wac taariikhda, qoraalo, sawiro, iwm), ama masixi tirtiray Files ( for files aad tirtiray).
3. scan ka dib, hubi faylasha aad rabto in aad ka saarto oo guji 'masixi Hadda' in ay gabi ahaanba ka kaxeeyo qalabka macruufka aad.
Hagaaji macruufka 8 on iPhone / iPad / iPod taabashada
4 Siyaabaha kaabta iPhone hor macruufka 8 Hagaaji
Kabsado SMS ka iPhone ka dib markii macruufka 8 Hagaaji
Faylal ay ka Android wareejiyo iPhone 6
1 Click to Copy Data ka iPhone si iPhone 6
Dardar macruufka 9/8, Waxaad samaysataa iPhone Run si dhakhso ah
Sida loo Delete Recent Xiriirada muujisid Up in Your History Text
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay Huawei Phones
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Google Nexus in macruufka Devices
Sidee ay u xaliyaan dhibaatada - Music Ma syncing ka dib markii macruufka 7 Update
Sida loo soo celiya iPhone Data ka dib markii macruufka 6 Update shil
> Resource > macruufka > Sida loo nadiifi iPhone / iPad / iPod taabto si rakib macruufka 8